အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အိန္ဒိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရမှုအပေါ် ဝမ်းနည်းပါကြောင်း န-စ-ကဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား - People Media Myanmar
Home အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အိန္ဒိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရမှုအပေါ် ဝမ်းနည်းပါကြောင်း န-စ-ကဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အိန္ဒိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရမှုအပေါ် ဝမ်းနည်းပါကြောင်း န-စ-ကဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အိန္ဒိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုအပေါ် မိမိအနေဖြင့် ဝမ်းနည်းပါကြောင်း န-စ-ကဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားခဲ့သည်။
တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံ တော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး၌ တွေ့ဆုံစဉ် န-စ-ကဥက္ကဋ္ဌက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် တွေ့ဆုံမှု၌ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုနှင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ် ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအပါ အဝင် အခြားနယ်ပယ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာများ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှု အခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အိန်ဒိယနိုငျငံ၌ ရဟတျယာဉျပကြျကမြှုဖွဈစဉျကွောင့ျ အိန်ဒိယတပျမတောျကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ အသကျဆုံးရှုံး ခဲ့ရမှုအပေါျ ဝမျးနညျးပါကွောငျး န-စ-ကဥက်ကဋ်ဌ ပွောကွား
ပွီးခဲ့သည့ျရကျပိုငျးက အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သည့ျ ရဟတျယာဉျပကြျကမြှုဖွဈစဉျကွောင့ျ အိန်ဒိယတပျမတောျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ General Bipin Rawat အသကျ ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုအပေါျ မိမိအနဖွေင့ျ ဝမျးနညျးပါကွောငျး န-စ-ကဥက်ကဋ်ဌက ပွောကွားခဲ့သညျ။
တာဝနျပွီးဆုံး၍ ပွနျလညျထှကျခှာမည့ျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့ျ နိုငျငံတောျစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌတို့သညျ ဒီဇငျဘာ ၁၆ ရကျနေ့က နပွေညျတောျရှိ နိုငျငံ တောျစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌရုံး၌ တှေ့ဆုံစဉျ န-စ-ကဥက်ကဋ်ဌက အထကျပါအတိုငျး ပွောဆိုခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ တှေ့ဆုံမှု၌ မွနျမာ-အိန်ဒိယ နှဈနိုငျငံ ခစြျကွညျရငျးနှီးမှုနှင့ျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကာကှယျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးမှုနှင့ျ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျ ရေးနှင့ျ စီးပှားရေးဆိုငျရာမြားတှငျပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုအခွအေနမြေား၊ စိုကျပြိုးမှေးမွူရေးလုပျငနျးမြားအပါ အဝငျ အခွားနယျပယျမြားတှငျပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြားနှင့ျ နှဈနိုငျငံတပျမတောျနှဈရပျအကွား ခစြျကွညျရငျးနှီးမှုဆိုငျရာမြား၊ လုံခွုံရေးနှင့ျ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့မှု အခွအေနမြေားကို ရငျးနှီးပှင့ျလငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျခကြျအရ သိရသညျ။
« နောင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ နိုင်ငံသားအားလုံး နိုင်ငံသားအသိအမှတ်ပြုကိုင်ဆောင်သင့်သည့် ကတ်ပြား တစ်မျိုးမျိုး ကိုင်ဆောင်မဲပေးရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း လ-ဝ-ကဝန်ကြီး ပြောကြား
နျူကလီးယား၊ ဓာတု၊ ဇီဝ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ တရုတ်နိုင်ငံကျင်းပပြုလုပ် »